FA471 FA472 FA473 FA474 ejegharị etiti - China Tianyi Group
FA471 / 472 Atọ-aro Linkage kọmputa ụdị elu ọsọ kwụsịtụ flyer ejegharị etiti ikporo elu space ọchịchị Usoro, tufuo cone drum Ọdịdị, n'ibu-akpụ na direction transposition owuwu nke mbụ flyer okpokolo agba. FA473 / FA474 Anọ aro linkage kọmputa ụdị elu ọsọ kwụsịtụ flyer ejegharị etiti ikporo elu kọmputa space akara Usoro, tufuo cone drum Ọdịdị, n'ibu-akpụ Ọdịdị, ngwa ígwè, na direction changi ...
Tụkwasịnụ Ikike: 20 tent kwa ọnwa
FA471 / 472 Atọ-aro Linkage kọmputa ụdị elu ọsọ kwụsịtụ flyer ejegharị etiti ikporo elu space ọchịchị Usoro, tufuo cone drum Ọdịdị, n'ibu-akpụ na direction transposition owuwu nke mbụ flyer okpokolo agba.
FA473 / FA474 Anọ aro linkage kọmputa ụdị elu ọsọ kwụsịtụ flyer ejegharị etiti ikporo elu kọmputa space akara Usoro, tufuo cone drum Ọdịdị, n'ibu-akpụ Ọdịdị, ngwa ígwè, na direction na-agbanwe agbanwe nhazi na dị iche iche na-agba nhazi. Ọ na-eme anọ bụ isi mbanye akụkụ na-agba ọsọ onwe ya, ọ na-achịkwa kọmputa space akara usoro na servo drive mode. Ugbu a, ọ bụ ihe ndị kasị elu ejegharị okpokolo agba na n'ibu-electronic mwekota nke China. O kwesịrị ekwesị ka dị ọcha ma ọ bụ blended nhazi nke combed owu eriri na keakamere eriri.
Previous: Ejegharị-mgbanaka spinning njikọ usoro
Next: FB471 ajị spinning ada etiti
Cotton ejegharị ụba
Fl200 ejegharị ụba
anọ Axial ejegharị ụba
High Speed ​​ejegharị ụba
New Light Heald ụba
Rieter ejegharị ụba
Ejegharị ụba N'ihi Small Mills
Ejegharị ụba Machine
Tri Axial ejegharị ụba
Triaxial ejegharị ụba
Ajị anụ ejegharị ụba